2Bamiselwa i-Ambass ye-UNHCR-Iindaba ze-Nigerian kunye ne-Global Stori
2U-Baba Idibia uqeshe i-UNHCR I-ofisi elungileyo ye-UNHCR, uBill Cosby usinike isibheno kwityala le- #MeToo, uSergio Aguero uthi utyando luhambe kakuhle. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. Imvumi-2U-Idibia wonyulelwa ukuba ngummeli we-UNHCR
2 Tata Idibia
Imvumi yaseNigeria eyaziwayo Ingenatyala Idibia eyaziwa njenge 2eba usanda kutyunjelwa ukuba ngummeli weKomishinari ePhakamileyo yeZizwe eziManyeneyo (i-UNHCR). Olu lwazi luvezwe ngumphathi weenkwenkwezi zomculo, Efe Omorogbe, kwiposti ekwabelwana ngayo kwiphepha lakhe elisemthethweni le-Instagram.
U-Omorogbe, ngelixa wayesabelana ngeendaba zokuba u-2aba usenziwa inxusa le-UN, wavuyisana nemvumi leyo kwaye wathandazela iNkosi ukuba imnike amandla okwenza okungaphezulu. Uthe: "Halala- @ official2aba. Ulwazelelo olufanelekileyo lokuzinikela kwakho okungagungqiyo kunye nokusebenza ngokungakhathali kwintlalontle yabantu ababalekiswe ngokuzinzileyo kwiAfrika nakwihlabathi liphela. Ngamana uThixo angakunika ubabalo kunye nokukwazi ukwenza ngaphezulu. Sikelela, bhuti. ”
2. UMphathiswa Wezemfundo waseGhana uvalelwe e-UGMC, elindele iziphumo ze-COVID-19
UGqr. Opoku Prempeh waya kwindawo yaseManhyia South kwingingqi yeAshanti apho wagqitywa njengelungu lePalamente yePalamente yePatriotic Party ngesityholo esidumileyo ngoMgqibelo, nge-20 kaJuni, ngo-2020.
Icandelo loMphathiswa Wezemfundo libhengeze ukuba uMphathiswa Wezemfundo, uGqr. UMateyu Opoku Prempeh kungokunje uvalelwe kwiYunivesithi yaseGhana iZiko Lonyango elinde iziphumo zovavanyo lwe-COVID-19.
Ngokwengxelo ekhutshwe nguMphathiswa, ilungu lePalamente yaseManhyia South (MP) beliziva lingonwabanga kangangeentsuku ezimbalwa kwaye lagqiba kwelokuba liye kuvavanywa okwesibini emva kovavanyo olungelulo ngo-16 kaJuni.
Isiteyitimenti saqhubeka nokuchaza ukuba ukuvalelwa kukaGqr. Opoku Prempeh "Amanyathelo okhuseleko lokujonga ngakumbi imeko yakhe."
3. UMphathiswa wezoKhenketho eMzantsi Afrika akanaso isikhokelo malunga nendlela esebenza ngayo ishishini
Umbutho iDemocratic Alliance (DA) ukhuphe ingxelo esithi ngumphathiswa wezokhenketho Mmamoloko Kubayi-Ngubane Akanaso isiseko sokusebenza kweshishini lakhe. Oku kuza emva kwezimvo awazenza ngexesha leseshoni yeNdibano yesiZwe ngoLwesibini, nge-23 kaJuni.
Umphathiswa wezithunzi ze-DA Manny de Freitas wathi xa ephendula imibuzo yomlomo ebuzwa kuye, uKubayi-Ngubane wachaza ukuba iSebe lezoKhenketho liza kulinika njani iqonga lokukhuthaza ukuthengisa kwiimveliso ngamashishini amancinci naphakathi athengisa izinto ezifana nempahla yokunxiba, imisebenzi yezandla, kunye nezobugcisa.
IDemocratic Alliance (DA) inoluvo lokuba "Eyona nto ilungileyo kunye nokusebenza kakuhle kohlahlo-lwabiwo mali" Iya kuba kukhuthaza iiwebhusayithi ezisebenza kulo amashishini okhenketho ukuze abakhenkethi bakhuthazwe ukuba bandwendwele iiwebhusayithi zabo; ukuphonononga iindawo zeholide ezizayo; kwaye ubhukishe uhambo lwabo olulandelayo.
4. U-Bill Cosby unike isibheno kwityala lokuhlaselwa ngokwesondo ePennsylvania
Inkundla ePhakamileyo ivumile ukuba iphonononge iinkalo ezimbini zetyala likaBill Cosby, kubandakanya nesigqibo sejaji sokuvumela abatshutshisi babize abanye abatyholwa abahlanu ukuba banike ubungqina malunga nokuhlangana kudala.
Kwisigqibo esothusayo esingavavanya isakhelo somthetho se #Nam amacala, ohlekisayo UBill Cosby uphumelele ilungelo lokubhena Uhlaselo ngokwesondo lowama-2018 ukugwetywa kwiNkundla ePhakamileyo yasePennsylvania.
Lo kaCosby oneminyaka engama-82 ubudala uvalelwe entilizweni ePhiladelphia phantse iminyaka emibini emva kokuba egwetywe enetyala lokuthengisa iziyobisi kunye nokuhlukumeza ngokwesondo umfazi wakhe kwikhaya lakhe ngo-2004. Ugwetywe iminyaka emithathu ukuya kwelishumi.
Inkundla ePhakamileyo ivumile ukuba iphonononge iinkalo ezimbini zetyala, kubandakanya isigqibo sejaji sokuvumela abatshutshisi babize abanye abatyholwa abahlanu ukuba banike ubungqina malunga nokudibana kwakudala nomlingisi owayekade enamandla kunye nehlakani.
Amagqwetha kaBill Cosby kudala abucela umngeni kwabo ubungqina njengento ekude kwaye inokuthenjwa. Inkundla iya kuthi iqwalasele, njengoko ilinganisa ubungakanani bobungqina obuvunyelweyo, nokuba ngaba abaphathi babelawula ubungqina ukuba uCosby wayenike i-Quaaluding, unyango oluvuselelayo kunye nonyango lwe-hypnotic, kubafazi bangaphambili.
Okwesibini, inkundla izakuhlola ingxoxo kaCosby yokuba unesivumelwano kunye nomtshutshisi owayengasoze abekwe tyala. UCosby uthe wathembela kweso sivumelwano ngaphambi kokuba avume ukunikela ubungqina kwityala loluntu lokumangalela.
5. USergio Aguero uthi ugqirha otyumkileyo kwidolo elonzakeleyo uhambe kakuhle
USergio Aguero ufake amanqaku we-180 yePremier League kwiManchester City
Umgadli weManchester City USergio Aguero uthi "Konke kuhambe kakuhle" emva koqhaqho kwidolo lakhe elonzakeleyo. Umntu waseArgentina wayeye e-Barcelona ukuya kubona ingcali yeedolo ngelixa esoyika ukuba lingaphela ixesha lakhe.
Umphathi wakhe Pep Guardiola uthe kuselithuba kakhulu ukubeka ixesha lokubuyela kwinkundla eneminyaka engama-32 ubudala. Xa ebuzwa ukuba i-Aguero ingakulungela na ukuphinda iqalise ukuphinda i-Champions League ngomhla we-7-8 Agasti, umphathi weSixeko wathi: Andazi ngoku. ”
Wongeza: Xa sele egqibile ukwenza utyando siyokwazi ukuba uSergio uza kubuya azodlala nathi. ”
Bona kwakho: Bukela ii-2aba ngokucula iingoma zikaTiwa Savage
Uhlobo Rave Juni 24, 2020